Indlela yokunyamekela ikati endala
Ikati yayihlala ubomi obonwabileyo kunye nobomi obude, ufuna ukunyamekela. Iikati ezindala kunye namathole amancinci afuna ukunakekelwa okhethekileyo, kuba iinkomo ezindala kunye nama-kitten anomzimba obuthathaka. Unokunyamekela njani ikati endala?
Ukunyamekela ikati endala
Kwientaka, ubudala buqala iminyaka eyi-10. Kwikati nganye, ukuqala kokuguga kudlula ngabanye, kuba kuninzi kuxhomekeka kwimpilo yakhe. Ngeempawu zangaphandle, ungabona indlela yokuguga. Xa sele ekhulile, ikati ilala ixesha elide, ayiba yinto ehamba phambili. Ukuva kwakhe kuhlahloka, akaphenduli ngokukhawuleza, ukuba igama lakhe ligama, liphendula kakubi kakhulu kwisimo esisemgangathweni kwaye siphendule ngakumbi ukunyakaza.
Ikati idlulisa njani ukuguga?
Kuya kuxhomekeka kwindlela lwakhe ulutsha oludlula ngayo. Ukuba wayekhokela ubomi obusebenzayo, ophethwe kakuhle, ogulayo omncinci, ngoko ixesha lokuguga kwakhe liza kuba lula. Kodwa kwiikati eziphilileyo, kukho utshintsho oluneeminyaka emizimbeni yazo, ngoko ke amathambo endala adinga ukunakwa ngokukodwa kunye nokunyamekela.
Iikati ezindala zidla ngaphantsi kwezona zincinci. Ngenxa yoko, ukuphepha ukukhuluphala, kufuneka uyanciphise inani lokutya nokunquma ukutya okunamafutha ekudleni. Ukuba ikati yakho idla ukutya, kufuneka uthenge ukutya okulungiselelwe izilwanyana ezindala. Ukuba ikati idla ukutya kuphela kwendalo, kufuneka ichithwe kakuhle, kuba iidanga ezindala zineengxaki zinozinyo. Ikati kufuneka ibe nokufikelela kokusela, amanzi amanzi.
Bayafuna amavithamini, ukuba ikati ayifuni ukuthatha ifomu elimsulwa, kufuneka udibanise kumanzi okanye ukutya. Ungamniki iivithamini ngokukhawuleza, kungcono ukudibana nodokotela wezilwanyana, i-avitaminosis iyingozi, kunye ne-hypervitaminosis.
Iikati ezindala zikhokelela ekuphumeni komzimba, zihlala ezifudumele kunye nezoxolo. Akunakwenzeka ukulinda ikati elidala ukusuka kumsebenzi omdala. Kodwa kufuneka ihambe kancane, kuba i-hypodynamia isongela ukukhuluphala kunye neengxaki ze-muscle. Kufuneka udlale nekati imihla ngemihla.
Iikati ezindala zixhomekeke kwizifo, kwaye ngamanye amaxesha zihlushwa zizifo ezininzi kwiinkathazo. Izifo ezingokoqobo zingabanjwa, ihudo, ukungahambisani nomzimba. Kodwa banako ukudibana nesifo sesifo okanye nesifo sikashukela. Ikati kufuneka iboniswe kumgqirha wezilwanyana, uya kusungula isizathu kwaye anikezele unyango.
Kwaye kwimeko enjalo, bonise i-vet ukuba kukho iphunga emlonyeni okanye ezinye iimpawu ezisolisayo. Kodwa ukuba ikati iphilile, kufuneka uyenze rhoqo emva kweenyanga ezi-4 ukuhlolwa kokukhusela kwi-vet.
Iikati ezindala zincinci kunokuba zidibanise, kunye neenwele zabo ngokukhawuleza. Nokuba ukuba ikati inwele-mfutshane, kufuneka udibanise yonke imihla. Ukuba iinwele azikude, kufuneka uhlaziye ikati ngeglavu ekhethekileyo kwisikhokelo ukusuka entloko ukuya emsila. Xa uhlalisa, kufuneka uzive itekisi, ukuba ingenayo i-tumors, iikati ezindala zithinteka kwizifo ze-oncological.
Xa sele ekhulile, iikati zipholile, ngoko i-litter yekati kufuneka ifakwe kufutshane nebhetri. Ukuba ehlotyeni ikati iyimfuneko yokumisa i-pad yokufudumala. Okanye ukuba wayeshushu, ikati ayikuphazamisi ngokugqoka ingubo ekhethekileyo.
Iikati ezindala ziyabacaphukisa kwaye zingenakuxhamla, zilale ebusuku ukuze ziphawulwe. Abaziva bathemba kakhulu phambi kweentaka ezinobundlobongela kunye neentsha, ziba nomona xa uletha intaka encinci endlwini. Oku kufuneka kuphathwe ngokunyamezela.
Nangona ikati elidala liziphatha kwaye livakalelwa kakuhle, lifuna ukunyamekela nokunyamekela. Yichitha ixesha elininzi kunye naye, ulibethe, ukhulume naye ngomusa. Kwaye ukuba wenza into engalunganga, akudingeki ukuba umgxeke kakhulu. Umzekelo, ikati endala iya kwindlu yangasese idlulile i-tray, kodwa kwenzeka ngenxa yokuba abanalo ixesha lokufikelela kuyo, kungekhona ngenxa yokulimala, kwaye ungabahlwayeli ngenxa yayo.
Ukunyamekela ikati endala akuyona into elula, kodwa sele ilungu lentsapho yakho iminyaka emininzi. Kufuneka ube nesineke, kwaye unike ikati lakho ukunyamekela, kuba wayefanelwe.
Ukuba ikati ifikelele kumdala, kufuneka ihlawule ingqalelo. Kule minyaka, udinga uxolo noxolo, umnike ngekona elifudumele nelinen. Kubalulekile ukuba ibhedi igcinwe ifudumele, kufuneka ukuba ibe kufuphi nebhetri okanye kufuphi nelanga, vumela ukuba ikati ibe neendawo ezimbini zokulala. Iindawo apho ikati lakho lithanda ukuya khona, yenza ukuba lifikeleleke. Akasakwazi ukunqumla kwisuka enye ukuya kwifestile, akusayi kuba nokuguquguquka. Qulunqa kakuhle izitya kunye namanzi kunye nokutya, indlu yangasese yekati.
Ukuba unendawo enkulu, kunzima ikati ukuba lijikeleze indawo enkulu. Vumela isilwanyana sakho sibe neklasi enye okanye amabini, kwaye kuya kuba nakho konke akufunayo. Ukuba ikati iyakuthanda ukuhamba kuwo onke amagumbi, kufuneka uqaphele ukuba iyatholakala kwaye ikhululekile. Izifo ezixhaphakileyo zeekati zisekudala: ukungahambisani nokuvuthwa kwe-urinary kunye ne-arthritis, okukuthintela ukuba ungene kwi-tray. Ukuqinisekisa ukucoceka kwendlu, kufuneka ubeke iiteyiti kumagumbi ahlukeneyo, ngoko kuya kuqinisekisa ukuba izimo zokuphila eziqhelekileyo zezilwanyana zakho.
Musa ukulayisha ngaphezulu ikati elidala kunye nemidlalo esebenzayo, kodwa ungalungiselela ukuhamba ngosuku olushushu. Ungaze ube nomsindo xa isilwanyana silele yonke imini, kwaye ebusuku, siphakamise ebumnyameni, saqhawula, ngenxa yeekati ezindala ziziva zilahliwe kwaye zodwa, zifuna ukunyuselwa ngakumbi. Ungakwazi ukufundisa ikati ukuba ulale nawe, ngoko akuyi kuphinda kubekho "iihonsathi zobusuku".
Yintoni yokutya ikati endala?
Xa isilwanyana sikhula, qhagamshelana nodokotela wezilwanyana malunga nento yokutya ikati elinjalo. Ukutya iikati ezindala zihluke kwizinto ezidliwayo ezikuzilwanyana ezincinane, ukutya okukhuni kunye noomileyo kufuneka kungabandakanywa, ikati lingakwazi ukuphula amazinyo ngokutya okunjalo, kwaye kule minyaka kunzima ukuhlafuna ukutya okunzima. Ngokuqhelekileyo kwiminyaka yobudala, iikati ziyakwazi, zitshintshe ukuthanda kwazo, kwaye kufuneka zilungele ukuba isilwanyana sidinga ukutya okunjalo, okwakunqatshelwe ngaphambili.
Iikati ezindala zidla ngokuphindaphindiweyo kwaye zincinci. Ukuthintela izifo ezahlukahlukeneyo, abanini kufuneka baholele isilwanyana kugqirha, kwiimviwo eziqhelekileyo, iikati ezindala zihlala zizifo zesifo. Ngaloo ndlela, kunokwenzeka ukulandelelanisa utshintsho lwamaxesha olunokudinga ukunyanzeliswa okuphuthumayo kunye nokhethekileyo.
Ekugqibeleni, songeza ukuba ukunyamekela ikati endala kuyadinga ngokunyamezela nangothando, ukwenzela ukuba iikati zizwe zithandane kwaye zikhathalele.
Izilwanyana zinyamezela njani iimeko ezimbi?
Indlela Yokutya Umalusi waseJamani
Uthando lwezilwanyana njengendlela yemfundo
Indlela yokondla i-kitten ngokufanelekileyo
Indlela yokuqhelanisa i-parrot ezandleni zakhe?
Iikati ezidume kakhulu kunye nomlingiswa wazo
Ndiyakuvuyela intombi ye-Easter 2016, umhlobo, izalamane. Imibongo emfutshane yovuyo ngePasika. I-Easter kaKristu -vuyisana nemifanekiso
Bhinqa, qaphela imilenze yakho!
Isethi yeemveliso zentsana ezinyangeni ezili-9
Ziziphi iindlela ezifanelekileyo zokusebenzisa ukunyamekela isikhumba seoli?
Amadoda amademomntu: njani unokuzikhusela
Izindlela zokusombulula ingxaki yesondo kwizinja kunye neekati
I-Avatar, eyalelwe nguJacob Cameron
La maqhinga amabhinqa aya kubetha nantoni na
Indlela yokwenza amaconco amahle: 4 iimfihlelo ofuna ukuyazi
Ukutya okunokulinganisela, isisiseko, imigaqo
Isimemo ngezandla zabo ekugqibeleni kwi-nursergart okanye kwi-4 kwiklasi
I-Recipe ye-sauce "iPerto"
Ukuhamba ngokukhawuleza ukulahleka komzimba
Indlela yokwenza i-shuriken ephepheni ngezandla zakho
I-Smart, enhle, enesizungu okanye kutheni andinayo inhlanhla